Ngaba iphepha lakho elimalunga nathi liyazilandela ezi ndlela zibalaseleyo? | Martech Zone
Ngaba iphepha lakho elimalunga nathi liyazilandela ezi ndlela zibalaseleyo?
An Ngathi iphepha lelinye lala maphepha achazwe kwi- lonke uluhlu lokujonga iwebhusayithi. Iphepha elibaluleke ngakumbi kunokuba iinkampani zinike ikhredithi kuyo. Kukhulu Ngathi iphepha lihlala lijongwa ngabafuna ukuba ngabasebenzi kunye nabaxumi ukuba bafunde ngakumbi ngabantu abasemva kwenkampani. Sihlala silibale ukuba ayizizo nje izinto kunye nezibonelelo ezilindelwe ngamva- bafuna ukuziva beqinisekile ukuba bazokusebenza nabantu ababathembileyo kwaye abazukuzisola!
Ithemba kunye nentlonipho zizinto ekufuneka zenziwe. Ukwazisa kuvela ekubeni phezulu kwengqondo. Zonke ezi kufuneka zibe ziinjongo zokugqibela zesicwangciso-nkqubo sakho sentengiso, ukusuka kwi-SEO kunye nokuthengisa umxholo ukuya kumajelo asekuhlaleni nakwi-imeyile. Ikhasi lenkampani yakho Malunga nathi lelinye ithuba lokubalisa ibali eliza kukunceda unamathele ezingqondweni zabathengi bakho. (Kwaye njengoko IBlue Acorn's isifundo siyangqina, ikwalithuba lokuthengisa.) UVincent Nero, ingcali yokuThengisa isiQinisekiso esiPhezulu
Imithombo yeendaba yokungqinga yahlalutya into eyayifana nokusebenza okuphezulu malunga nathi kunye nokubeka inqaku elibonisa Ama-50 aphefumlelweyo ngathi. Bavelise le infographic intle ebonisa iindlela ezili-11 ezilungileyo onokuzilandela njengoko uyila eyakho:
Umgangatho wokuma Beka ixabiso lesindululo sakho ngaphezulu kwesibaya apho abasebenzisi bachitha khona iipesenti ezingama-80 zexesha labo.
benefits - abathengi bakhetha ukufunda malunga nezibonelelo ezilungileyo kunezinto ezingalunganga.
Vusa iimvakalelo -Ulindelo lwakho luya kuba ngamaxesha ama-2 ukuya kuma-3 ngaphezulu kokuzibandakanya nebali leemvakalelo ukubaphembelela.
yokuzonwabisa -Uninzi lwabenzi bezigqibo bakhetha ukubukela ividiyo kunokufunda isicatshulwa kwiphepha.
UMsunguli -Bandakanya umfanekiso owaziwayo womseki wenkampani yakho, uyonyusa ukuguqulwa okungama-35%!
iifoto - abathengi bachitha ixesha elingange-10% ngaphezulu bejonga iifoto kunokufunda isicatshulwa kwiphepha. Ukwahluka kwezinye izithonga zobungcali!
Akukho zifoto zesitokhwe - Iifoto zesitokhwe azikho nje i-blah… eneneni sisitshixo sokungazithembi inkampani.
baqinisekiswa -Ubungqina babathengi bonyusa ukuthengisa nge-34%!
Uhlolo oluqinisekileyo -72% yabantu bathi uphononongo olululo lubenza bathembele kwishishini lasekuhlaleni ngakumbi.
Shayela kuNyathelo -Ufuna ukuba undwendwe lwenze ntoni emva kokuba luphonononge iphepha lakho? Uguquko kathathu ngokongeza i-CTA!
Iinkcukacha zoqhagamshelwano -I-51% yabantu bacinga ukuba ulwazi loqhakamshelwano yeyona nto ibalulekileyo ilahlekileyo kwiiwebhusayithi. (Siyathanda ukuyibeka ezantsi ephepheni kwiphepha ngalinye!)
Nantsi infographic, Inzululwazi ibaluleke kakhulu malunga nathi.
tags: malungangathingathi ezona ndlela zilungileyomalunga nezinto zekhasimalunga nathi amaphephaizinto ezilungileyoISigeria MediaInzululwazi ibaluleke kakhulu malunga nathiUVincent Nero
Izithintelo ezindleleni ezi-6 zokuya kwiHlabathi liphela nge-E-Commerce yakho